भोलि शुक्रबार देखी 'लिलिबिली' : के बिक्ला त प्रदिपको स्टारडम ? | Jukson
भोलि शुक्रबार देखी 'लिलिबिली' : के बिक्ला त प्रदिपको स्टारडम ?
चैत्र २९, पोखरा ।
भोली शुक्रबारदेखि नायक प्रदिप खड्काको चलचित्र ‘लिलिबिली’ अल नेपाल रिलिज हुदैछ । चलचित्रलाई मल्टिप्लेक्समा उच्च शो पनि मिलेको छ ।
लगातार दुई वटा हिट चलचित्र दिएका प्रदिपको स्टारडम पनि अझ बढेको छ । तर प्रदिपको बढ्दो स्टारडमका कारण चलचित्रले राम्रो ब्यापार गर्ला भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
नेपाली रजतपटको सबै भन्दा चर्चित नाम अनमोल के.सीको चलचित्र 'कृ' ले सोचे अनुसारको जादु देखाउन नसकेको सबैलाई जानकारी भएकै कुरो हो । अनि पछिल्ला रिलिज भएका चलचित्रहरुले पनि ('शत्रु गते' बाहेक) खासै राम्रो ब्यापार गर्न सकेनन ।
यस्तो अवस्थामा प्रदिपलाई आफ्नो तेस्रो चलचित्र पनि हिट बनाउने र ह्याट्रिक गर्ने अवसर र चुनौती दुवै छ ।
तर नायक प्रदिप खड्काको स्टारडम र नायिका जसिता गुरुङको बढ्दो क्रेजका कारण दर्शक हलसम्म आउने विश्वास हल संचालकहरु र निर्माण टिमले गरेका छन् । यहिकारणले गर्दा पनि ‘लिलिबिली’ले चलचित्र ‘शत्रु गते’को दबदबा रहेको समयमा पनि उच्च शो पाएको हो ।
चलचित्रले कस्तो ब्यापार गर्ला ? प्रदिपको स्टारडम बिक्ला या नबिक्ला ? अनि प्रदिपले ह्याट्रिक गर्लान या नगर्लान ? जस्ता तमाम प्रश्नहरुको उत्तर भने शुक्रबार र शनिबारको ब्यापारले दिनेछ ।
चलचित्रमा प्रदिप र जसिताका अलावा अर्की चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीको पनि अभिनय रहेकोछ । मिलन चाम्सको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रलाई गोविन्द शाही, सुदिप खड्का र मिलनले मिलेर बनाएका हुन् ।
मैले साँच्चिकै भूत देखेकी छु : ऋचा शर्मा
सलमानले अदालतबाट विदेश जाने अनुमति पाएसँगै नेपाल आउने पक्का !
अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सवमा क्लबस्तरीय बास्केटबल
भेडीगोठ जोगाउने अभियान मा दुर्गा घोताने, सुबाश गुरुङ, अनी राजेश गुरुङ एकै साथ
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. २७ मा कांग्रेस प्यानल बिजयी
चलचित्र ‘मारुनी’ को फस्टलुक रिलिज
ट¥यो ‘कृ’ र ‘कान्छी’ भिडन्त